Omega Drill nke Israel gosipụtara ntiwapụ nke ụdị COVID-19 ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » Omega Drill nke Israel gosipụtara ntiwapụ nke ụdị COVID-19 ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Omega Drill nke Israel gosipụtara ntiwapụ nke ụdị COVID-19 ọhụrụ.
N'ịbụ ndị ụlọ ọrụ Bennett na-eto dị ka ụwa-nke mbụ, egwuregwu ahụ na-eleba anya na njikere maka mmachi n'ọdịnihu na nnọkọ na mmegharị, mgbochi iche na mgbochi mkpọchi, yana nyocha nlekọta na ịdọ aka ná ntị ka a ga-enye dị ka ụdị ọhụrụ na-amalite. Ngwuputa a na-anwale nzaghachi ụlọ ọgwụ, yana njikere na mpaghara ndị ọzọ.
Onye isi ala Naftali Bennett kwupụtara ịme anwansị ahụ na Twitter na Wednesde.
Bennett na-ezo aka mgbe niile na 'Omega strain' iji kọwaa ngbanwe nje na-esote nke achọpụtabeghị.
Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa obodo nke Israel duziri na-ewere ọnọdụ n'ọnụ ụlọ ọnọdụ dị na National Management Center na Jerusalem.
Gọọmentị Israel ekwupụtala mmalite nke mmega ahụ na mba niile n'ụdị 'mmụgharị ọgụ' iji nyochaa njikere obodo ahụ maka enwere ike ịmalite ụdị nje COVID-19 ọhụrụ amabeghị.
Israel's onye isi ala Naftali Bennett, onye na-ekwukarị maka mmụgharị nje na-esote, nke a na-achọpụtabeghị, dị ka 'Omega strain', kwupụtara mmemme ahụ nke ọma akpọrọ 'Omega drill' na Wednesde.
Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa obodo nke Israel duziri na-ewere ọnọdụ n'ọnụ ụlọ ọnọdụ dị na National Management Center na Jerusalem. Ihe omumu a na-etinye ụlọ ọrụ obodo na ụlọ ọrụ gọọmentị n'ụzọ ha iji hụ ma ha ga-enwe ike ịnagide n'ihu "iche COVID-19 ọhụrụ na-egbu egbu."
Bennett kwuru, "Mgbe n'ebe ụfọdụ n'ụwa, ọnọdụ coronavirus na-akawanye njọ, Israel enweghị nchebe na nchekwa." "Iji nọgide na-enwe nke a, na ịga n'ihu na-eme ihe anyị na-eme kwa ụbọchị, anyị ga-etinyerịrị mkpịsị aka anyị n'ọkpụkpụ ma jikere maka ọnọdụ ọ bụla."
The onye isi ala otuto IsraelNzaghachi nke ọrịa na-efe efe, na-ekwupụta na steeti ahụ "dị ezigbo mma" ebe ọ meriri ọrịa nke anọ ya, na-agbakwunye na ọ "na-achọ ịhapụ Delta [iche] n'azụ."
Israel ghọrọ otu n'ime mba izizi wepụta atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'oge ọkọchị, na-amalite site na ndị okenye ya ma na-arụ ọrụ site na ọgbọ ndị ọzọ. Bennett toro atụmatụ ahụ, na-ekwupụta na Israel bụ "ọsụ ụzọ nke atọ" megide COVID.
Omega Drill nke Israel na-egosipụta ntiwapụ nke ụdị COVID-19 ọhụrụ - Site na Ọbara nke Nwa Atụrụ ahụ ekwu, sị:
November 28, 2021 na 15: 22